USiri akasakwazi ukwenza u-Night Shift kwimowudi yokugcina amandla | IPhone iindaba
Izolo iApple iyilungisile kude ingxaki eyavumela ukufikelela kunxibelelwano lwethu neefoto ukuba siyabuza Siri ukwenza uphando kwi-Twitter. Kodwa kubonakala ngathi ayisiyiyo kuphela uhlengahlengiso olwenziweyo ngabo baseCupertino kumncedisi wabo: isuse amandla okwenza isebenze iNight Shift (inkqubo etshintsha ubushushu besikrini ukusinceda silale ebusuku) ngeSiri xa i-iPhone okanye i-iPad inendlela yokugcina amandla esebenzayo.
Kwithiyori, ukuze i-Night Shift isebenze kuyafuneka ukuba isixhobo senze umzamo owongezelelweyo obangela ukusetyenziswa okukhulu kunye nokunciphisa ukuzimela. Xa isixhobo sinendlela yokusebenza yokonga amandla esebenzayo kwaye sizama ukwenza i-Night Shift kuseto okanye iZiko loLawulo siya kubona ukuba ukhetho alufumaneki. Ngokusebenzisa ifayile ye- imowudi yamandla asezantsi, Ebusuku Shift icinyiwe ngokuzenzekelayo kodwa, kude kube izolo, inokuphinda isebenze ngeSiri.
USiri "uyalibala" esinye sezakhono zakhe
Ngoku, xa sicela uSiri ukuba asebenzise i-Night Shift ngelixa sisebenzisa imowudi yamandla asezantsi, iya kuphendula «Ukuvula imowudi ye 'Night Shift', kuya kufuneka ndicime imo yamandla asezantsi. Ufuna ndiqhubeke?»Sinokuphendula ngelizwi lethu kwaye, ukuba sithi ewe, iyakwenza kungasebenzi imo yokonga amandla kwaye isebenze Night Shift.
Ukuze usebenze, uSiri usebenza kwi-Intanethi, oko kuthetha ukuba kufuneka iqhagamshelwe kwi-Intanethi ukuze ikwazi ukwenza le nto siyicelayo. Yiyo loo nto uninzi lweempendulo zakho ezintsha, njengaxa sikucela ukuba usixelele malunga neKeyynote elandelayo kwaye usixelele isiqhulo malunga nomsitho, zisetyenziswa ngaphandle kokuba sihlaziye isixhobo se-iOS. Ngeli xesha balungise le bug esele ikhankanyiwe kunye nenye ibug uninzi esinokuthi siyisebenzise njengomsebenzi. Luthini uluvo lwakho?
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iapps zokusebenza » Siri » I-Night Shift ayinakuphinda isebenze kunye neSiri kwimodi yokugcina amandla
UBernie Sanders ufuna iApple yenze eUnited States kwaye ihlawule irhafu engaphezulu